Ifandesi yeSotheby yeyona ndawo ipeyintiweyo yekati enkulu-kwihlabathi liphela - Indlela Yokuphila
Ifandesi yeSotheby yeyona ndawo ipeyintiweyo yekati enkulu-kwihlabathi liphela
UHLAZIYO, 11/5: Umzobo wathengiswa nge-3 kaNovemba ngo $ 826,000 - elingaphezulu kabini kunexabiso eliqikelelweyo. Ngelixa umthengi womsebenzi engaziwa, siqinisekile ukuba baninzi njengekati njengomculi, kuba bagqibela ngokuhlawula i-19,666 yeedola ngekati nganye.
ibhedi ene-tv eyakhiweyo
IBALI LOKUQALA, 10/30: Emuva ngo-1891, umzobi wase-Australia u-Carl Kahler wagunyaziswa ngu-San Francisco usozigidi kunye nomqokeleli wobugcisa, UKate Birdsall Johnson , ukwenza i-epic ukupeyinta ikati . Waye (njengoko unokuthelekelela) umnini wekati, umthandi, kunye no-obsessive - abanye bathi wayenabahlobo abangaphezu kwama-350 abanoboya, ngelixa abanye besithi yayisondele kakhulu kuma-50 (umm isekhona Okuninzi).
Ngokwemigangatho yakhe nawuphi na umntu, uKahler wazisa kwisabelo sakhe emva koko abanye: Isiqwenga esigqityiweyo yayiyi-6-by-8.5-inyawo yeoyile ye-Angoras kunye nePersi, ezamthatha iminyaka ukuyigqiba. Wayithiya igama Abathandi Bomfazi Wam , emva kwesidlaliso sokuba ngumyeni kaJohnson wamnika amaqabane akhe.
Nanku ukujonga kwisiqwenga:
Ngobubele bukaSotheby / uCarl Kahler
Okulusizi kukuba, uJohnson wasweleka ngo-1893 kwaye wayenethuba elifutshane lobugcisa. Ukusukela ngoko lo mfanekiso usindile kwinyikima yomlilo e-San Francisco ngo-1906 kwaye wabizwa ngokuba 'yeyona peyinti inkulu emhlabeni' Ikati Magazine ( kwaye ngo Iiponti ezingama-227 Ingxelo yelizwi enkulu ukupeyinta ikati, nayo). Kwaye nge-3 ka-Novemba umntu omnye onethamsanqa uya kuba nakho ukuyibiza ngokuba yeyabo, kuba uSotheby nguye uyithengisile phakathi phakathi kwe-200,000 kunye ne-300,000 yeedola.
izicwangciso zendlu evulekileyo
Funda nzulu ngomzobo kule vidiyo:
[nge Unyango lweZindlu
flip okanye flop ixesha elitsha
zangasese ezimhlophe nezimvi
Iindlela zokuyilwa kwekhitshi ngo-2020
ifanitshala yegrey yegumbi lokuhlala